Quruxda Dhirta Appricot - Akhri Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics online
Quruxda quruxda ee loo yaqaan "Appricot Forest" Celceliska 3.4 / 5 ka mid ah 5
N / A, waxay leedahay 4.2K views
Romance, Shounen Ai, sarraysa
Waad aqrinaysaa Quruxda quruxda ee loo yaqaan "Appricot Forest" cajiib ah manhwa.
Wuxuu mooday inay tahay shil in kumanaan sano dib loogu celiyay shaqo joojin biriq ah. Waxba kama uusan ogeyn inuu qof halkaas ku sugnaa muddo tobannaan sano ah. Imaatinkiisii ​​qof ayuu ka soo celiyay kuwii dhintay, wuxuuna dib ugu midoobay wixii ay ka lumeen. Isaga oo maraya taxane isku-dhafan, isaga iyo qofka sugaya ayaa u yimid inay kulmaan, ogaadaan, oo is jeclaadaan. Xidhiidhada aayaha u horseeday isu soo bixii, waxay ka soo baxeen silsilado jaban oo jiil hore. Quruxda ayaa sii ahaata xitaa marka Apricot Forest ubaxu uusan sii socon, sheekada jacaylkooda iyo masiibada, oo ay kaga hadasho kaliya dabaysha.
Cutubka 48	October 6, 2021
Cutubka 47	January 19, 2021
Cutubka 46	January 19, 2021
Cutubka 45	January 4, 2021
Cutubka 44	January 4, 2021
Cutubka 42	January 4, 2021
Cutubka 41	January 4, 2021
Cutubka 40	January 4, 2021
Cutubka 39	January 4, 2021
Cutubka 38	January 4, 2021
Cutubka 37	January 4, 2021
Cutubka 36	January 4, 2021
Cutubka 35	January 4, 2021
Cutubka 34	January 4, 2021
Cutubka 18	September 1, 2020
Cutubka 1aad - Ch.001	October 8, 2020
Cutubka 1	October 6, 2021
Sarraysnimadayduna waa dhimataa
Ilaaha Dagaalka, Princess Waalan